Nhaurirano: mifananidzo huru
Zvakaoma kuva mukadzi here? Ndine urombo kuti ndipindure mubvunzo nemubvunzo, asi ... Zvakaoma here kurarama zvachose? Mushure mezvose, vakadzi vanozvarwa uye havasi ivo. Kune chokwadi vanhu vasingadi huri hwavo ...
Ungochani - chirwere kana kukanganisa? Ungochani unogona kurapwa here? Mubvunzo unofadza uye wakaoma, mhinduro yacho haina kunyanya kuoma. Sei Nokuti chiitiko ichi chinofanira kuswedera pedyo zvakanyatso ...
Ichokwadi here kuti mumauto ehondo akawedzerwa uye akawedzera bromine kuti tiite? Kana kuti inhema here? Mune dzimwe nguva dzeSoviet, vakawedzera kuti isu takanyarara kubva kwaari, hatina kuona.Zvino, bromine inoda zvakadini kupona, kuitira kuti 18-20 ...
Nzira yekutumira sei mumakori ekutanga anonakidza? Chikamu nokuda kweizvi, ndinoda zita rangu rezita rangu uye ndisashandise kwete BV chete. Ndinofunga kuti ini ndine, chaizvoizvo, yakanyatsokura ...
Ndeipi nguva ipi iwe unoda kusvuta munhu asiri kusvuta? Ndakasvuta kamwechete muupenyu hwangu pandakapinda mudambudziko rakakomba. Pakanga pasina simba rekuchema, akashamiswa paakaona motokari yakanamatira kumashure. Kunyarara ...
Chii chinonzi pissing? Kune vanhu vakashandurwa nemuyo, kana kuti vasikana, vanosiya maroni avo. Vanogona kuzviita kune mumwe munhu, kana kungozvinyora, uye uyo anoda pissing achabva mazviri ...
Ndiani kwamuri "MWANHU AKANAKA"? Ndine murume muduku akadaro. Izvo zvakakosha, zvinyoro, pane izvo mweya wangu unofara, nokuti ndinoda nezvekakomana uyu ...
Sei musikana wangu achitya zvepabonde? Ndinofunga kuti chakanga chisiri chaicho chakanaka uye chisingafadzi chiitiko, uye zvichida kunyange chekutanga paakanga achinyatsogadzikana, saka izvi zvingave sei ...
Iko hymen haisi nguva dzose yakanganisa panguva yepabonde here? Hungu, zvinoitika. Hazvisi zvisinganzwisisiki apo vamwe vasikana vakakwanisa kuita zvepabonde kwechinguva, asi kuvimbika kwei hymen hakuna kupesana.
Ndezvipi zvinonyadzisira zvinonyadzisira uye kuti zvakasiyana sei nezvinoitika? Zvinonyadzisira zvinopesana nezvirwere zvechisimba. Zvinotaridzika zvishoma. Chimwe chinhu chiri pedyo nekunyora. Asi izvi hazvirevi, nokuti ...
Mibvunzo ye134 mu database yakagadzirwa mu 0,947 masekondi.